Oromoo: RAKKOO RAKKOO CAALU (MASHAQQAA) !!! – Kichuu
HomeAfaan OromooOromoo: RAKKOO RAKKOO CAALU (MASHAQQAA) !!!
Oromoo: RAKKOO RAKKOO CAALU (MASHAQQAA) !!!
Oromoo: RAKKOO RAKKOO CAALU (MASHAQQAA) !!! Waanuma dubbannuu fii hojjennutu namaafi galuu hindandayu!!!
1. Bilisummaa, keesumaa walabummaa hawwina!! Diimookiraasiin dawaa isaatii, karaa nagaa argannaa, sabuma nugarboomse waliin tokko taanee, harka walqabannee keessaa baana jenna.
2. Qabsoo keenya biyyatti galchina, biyyatti gale malee hinta’uu !!! jenna. Garuu hoogganoota keenya kaani Ameeriikaa, kaani ammo Awuroophaa irraa filanna, maallaqa guddoo itti dhanglaasina, bilisummaa keenya nuufi fida jenna, hooggana haarayaa biyyuma alaa kanaa ittuma daddaballa.
3. Tokkummaan keenya murteessaa dhaa jenna, uummati keenyallee tokko ta’aa jechaa waggoota hedduu booyaa jira !!! Garuu jaluma jalaan dhaaba haarayaa omishaa jirra, ka garagarummaa fayyisu irra ka madaa haarayaa bali’isu irra filanna, dhaaba wareegama qaalii wareege asiin nugahee balaaleffannee ka biraa abdanna.
4. Hooggana dhabnee, hoggana cimaa barbaanna jenna !!! Qabsaayota cichoo balaaleffanna, hooggana cichoo balaaleffannee warruma diinaafi hojjetaniin boonna, gantuu fii nama qe’ee Oromoo gurguree sooromee faatti sagadna, qabsaawaa kaffaltii tookko malee jireenya isaa wareege abaaraa isa mindaa olaanaa fudhatee ijatti muka nutti dhiibu irra hawwanna, isa kaleessa diina waliin taa’ee saba keenya ficcisiisee hunda caalaa jaalanna, qabsoo ka gargaaruu arrabsinee isa cal jedhee mana taa’uu faarsina, ANI DHAABA KAMUU KEESSA HINJIRUU JECHUUN DHAADDANNOO AMMAYYAA TA’E !!!
5. “ANI DHAABA KAMUU KEESSA HINJIRUU” JECHUUN DHAADDANNOO AMMAYYAA YOO TA’E!!! Akkamittiin qabsoo gargaarra? Mee akkamumatti jaarmayaa malee bilisa baanaa? Akkamiin Oromoo dhumaa jiru gargaaruu dandeenya? Akkamitti hidhannoo fii waraana jabaa ijaarra? Akkamumatti nagaa biyyaa mitii nagaa qee’ee dhuunfaa keenyalle tikfanna? Silaa waa’een bilisummaa fii walabummaan biyyaa abjuun hindhufuu!!! Diimookiraasii, tokkummaa, TPLF saba keenya irraa kaasinaa, abaluun hoogganaa keenyaa,….. waanuma jettani jedhaa malee waa hunda dura naamusaa fii obsa horanne DHAABBOLEE OROMOO LAFA GUUTAN KANA KEESSAA TOKKO KEESSATTI GURMAAYUUN DIRQAMA natti fakkaata. Yoo akkasi hintaane waa’ee Oromoo oduufi abjuun rakkoo dabala malee dhibee tokkollee hinfuru. Mee irra dedeebi’aa yaadaa!!!!
6. Jalee mootummoota duraanii, warra akka Qanyzmach, Fitaraarii, Graamaash, fii Balaambaraas faa abbotti keenyaa, ilmma Qanyaamaashi abaluu abaluuti ani jennee dhaaddanna, ilma warada Astadaadarii, isapaa, fii OPDO, jalee diina keenya ammayyaallee goota keenya jechaa ittiin dhaaddanna. Hinumaayyuu, warra jireenya isaanii guutuu qabsoo irratti saba Oromoofi jecha dabarsanii, aarsaa godhaniin niarrabsina, warra mindaa kafalchiisanii tokkummaa Oromoo irratti rakkoo uumanin nifaarsina. Ammoo, hooggana cimaa barbaanna!!!
7. Tokkummaa saba keenyaa barbaanna. Garuu, yaada walfaallessu saba gidduutti akka marihatu itti gadi fidna. Yoo yaada walfaallessu keessaa gara tokko goree yaada kenne ammo gandaan irratti bobbaana, ykn warra ganda abaluu jennee arrabsina, yoo ganda sanitti dhalate cubbamaa goonee ka ganda kootti dhalate ammo eebbifamaa goona !!! RAKKOO DHA!!!
Via-Gizachew Teferra Tesso